“PASTỌ OGBU MMADỤ” ACHỌGHỊ ỊNWỤ – hoo!haa!!
“PASTỌ OGBU MMADỤ” ACHỌGHỊ ỊNWỤ
Rev. Chibuike Ezeokeke, onye nke jiri aka ya mee onwe ya pastọ n’ụlọ ụka ọ kpọrọ Holy Junction Prayer Ministry n’Okpo Ekwulobia nke steeti Anambra ma bụrụkwa onye ana-akụrụ mgbịrịgba ọnwụ n’ụlọ nkpọrọ dị n’Enugu, na-ebeputezi anya mmiri, na-ayọ ka Chineke zọpụta ya n’aka ọnwụ.
Anọrọ n’Ekwulobia maa pastọ Ezeokeke ikpe ọnwụ maka na ogburu ochụ. Ọbụ nnukwu onye ọka ikpe bụ Justice P. Obiora nọ n’isi oche n’ịkpe ahụ ekpere were maa pastọ Ezeokeke ikpe ọnwụ, maka na o gburu nwa nne ya bụ Mazị Emmanuel Ezeokeke.
Ebe ọbụ na pastọa enweghị ike itinye akwụkwọ ka ekpegharia ikpea ka ọ gasịrị abalị iri itolu enyere ya na amara, ihe chere ya n’ihu ugbua bụ ọnwụ site na nkwugbu.
Nsogbu pastọ Ezeokeke malitere ka ọnwa ise n’afọ puku abụọ na itolu dị na abali isii bụ mbọchị o jiri mma sugbue Emmanuel bụ nwa nwanne ya nwanyị bụ Rita Okonkwọ ana-akpọbu Rita Ezeokeke, maka ịzọ ala ụmụnna.
Onye ogbu mmadụ ndụ na-atọ ụtọ bụ pastọ Chibuike kporo ndi be ya wara ọsọ ka o gbuchara nwanne ya. Nkea mere ndi uwe ojii jiri malite ịchọ ya.
Iko ya jury na onwa iri n’otu nke afọ puku abụọ na iri ojiri gbue nwanne ya. N’ime oge ahụ ka ahụrụ ya n’Akpụgoeze dị na steeti Enugu. Mgbe onye mara ya hụrụ ya ebe ahụ, o mere ka ndi mmadụ mata ihe o mere. Ọ fọrọ nwa obere ka etigbue ya ebe ahụ mana ndi uwe ojii biara zọpụta ya.
Ọbu ebe nwokea bụ pastọ Chibụike na-akwado oziọma n’ọgbakọ “crusade’ ka aka kpara eze-ka-udele.
Ka ọnwa isii n’afọ puku abụọ na iri na asaa dị na abalị iri abụọ na otu, ekpere ya ikpe ma ma ya ikpe ọnwụ site na nkwụgbu. Enyeghị ya ohere ịkwụ nra ọbụla.
Kita ọ nọ na ụlọ nga dị n’Enugu na-echere ọnwụ ya.
Ka ihe siri kwụrụ ugbua, pastọ Chibụike ka anyị nụrụ na ọ malitere na ezi ndi otu ya ndi ọzọ na-eche nkwụgbu ozi ọma nke nchegharị. Olile anya ya bụ ma enwere ka ọ ga-esi adabara ya ka aka na-achị steeti Anambra bụ Willie Obianọ tinye aha ya na ndi aga-emere ebere
Previous Post: NWOKOYE EMELA EMELA, NWOKOYE KA NA-EMEKWA
Next Post: NDI ABA NA-ABA MBA